Naujų 52 metų „Idea dia manomboka amin'ny blôginao“
Raha te hiverina matetika bet amin’ny blôginao ny mpitsidika tranonkala, dia mila manome azy ireo fitaovana vaovao hamaky ianao. Klausimas apie tai, kaip matai, anao izy, ireo hanome torohevitra tsara azy ireo ary hanome azy amin’ny fandaharam-potoana tsy tapaka. Mety hanontany tena aloha ianao hoe firy no tena mila mamorona lahatsoratra bilaogy vaovao.
John Rampton, mpanampy amin’ny orinasa mpamorona, nanoratra tao amin’ny Forbes fa "bebe kokoa hatrany ny". Avy ey izy dia nanohy ny tantarany avy amin’ny HubSpot momba ireo blôgy izay mandalo matetika.
Misy orinasa iray mamoaka mihoatra 16 hafatra iray isam-bolana telo sy tapany sy sasany ny fifamoivoizana tahaka izay nandefasana imbetsaka isam-bolana fotsiny. Noho izany, pinigų te hampiasa io kukliai io ianao dia mila hamoaka lahatsoratra voalohany indimy in-efatra isan-kerinandro.
1.1 „Toro“ Nr. 1. Mamorona fandaharam-potoana
2 Mianatros biologa mahomby amin’ny fanentanam-panahy
2.1 „Huffington Post“
2.2 Neilas Patelas
2.3 Chrisas Hornakas
Ny lahatsoratra efatra isan-kerinandro dia mety tsy hihoatry ny feo, fa ny fiainana dia miezaka ny mandeha amin’ny lanana. Manana orinasa mihazakazaka ianao, fianakaviana iray mitazona izany, ary mety ho tombontsoanao manokana sy raharaham-barotra vitsivitsy izay maka ny fotoanao. Na soratra dia mety ho tsy mety ho anao, ay ny fananganana hevitra vaovao efatra isan-kerinandro dia mety hetra.
Rehefa takiana aminao ny handefa matetika izany, dia mora be ny mihazakazaka miditra amin’ny alàlan’ny mpanoratra. Soan Ihany, misy zavatra azonao atao mba hiasa amin’ny alàlan’ny sisan-tsoratry ny mpanoratra, mitadiava hevitra vaovao, ary mifikitra amin’ny fandaharam-potoana.
Pikantsary amin’ny pejy Gyvenimo būdas Huffington Post
Diniho iray amin’ireo tranonkalam-baovao malaza indrindra ao amin’ny Internet, laikraštis „Huffington Post“. Šiuo metu žinomas matematikos matematikos metinis rodinys, anoniminis maratoninis azijietiškas Telo isan-jato ny mpitsidika 110. Misy dingana maromaro azonao atao mba hamoronana famoahana famoahana izay matetika, nefa miasa ho anao.
„Toro“ Nr. 1. Mamorona fandaharam-potoana
Na zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mipetraka ary manamboatra fandaharam-potoana hamoahana ny tranokalanao. Na dia mety tsara aza ny lahatsoratra efatra amin’ny herinandro, dia mety ho eo amin’ny toerana tsy ahafahanao mitantana azy fotsiny ianao. Tsara izany. Raha indray mandeha isan-kerinandro ny zava-drehetra azonao atao, dia manaova fandaharam-potoana handefasana indray mandeha isan-kerinandro.
Na hafatrao dia tokony ho azo ambara ho an’ny mpamaky anao, noho izany dia fantany ny fotoana hikatsahana ny lahatsoratra. Azonao atao, ohatra, ny mandefa ny Zoma amin’ny 13:00 ary hizara amin’ny media sosialy amin’ny fotoana irayy. Ny mpamaky sy mpanaraka anao dia hanantena izany, koa mitandrema hafatra vitsivitsy amin’ny filaharana mba hahafeno ireo zavatra andrasana.
Tsy mora ny manatona hevitra vaovao. Vantany vao nandia ny fototry ny faritra misy anao ianao, dia mety hahita olana be aminao na votoaty vaovao. Taigi Iany fa misy zavatra azonao atao mba hahatongavana lahatsoratra tsy manam-paharoa.
„Miresaha amin’ny mpamaham-bolongana hafa momba ny fomba fisainany hevitra“.
Mandania foto Kely hanaovana zavatra hafa momba ny famoronana Mameno ny "famoronana tsara" ianao.
Vantany vao manana fandaharam-bilaogy misy ianao, dia jereo ny tanjona tianao hapetrakao. Rehefa mitombo ny tranokalanao ary mitombo ny fidiram-bolanao, diakonas afaka manakarama mpanoratra ianao na mampitombo ny fotoana ampidirinao and anaty bilaogy.
Kai pinigų manoratra lahatsoratra 1 isan-kerinandro ianao dia mety hametraka tanjona hanoratanao indroa izany tamin’ny antsasaky ny taona ary hanoratra lahatsoratra 2 isan-kerinandro. Ny antony fotsiny dia manamboatra fandaharam-potoana dia tsy midika hoe tsy afaka manampy azy ianao. Atombohy amin’ny tanjona tratrarina ary azonao atao hatrany ny tanjonao.
Mianatros biologa mahomby amin’ny fanentanam-panahy
Andao hiverina bet kokia aminoity tranokala ity ary hojerentsika ilay izy. Misy antony tohizako hatrany momba ity tranonkala ity – mahomby.
HP diamobilioji latatspratoji vaovao mama yra 58 segondra tsirairay.
Neil Patel dia mpamaham-bolongana mahomby izay mandinika tsara ny ataon’ny bilaogera hafa. Mety ho efa naheno ny anarany izy raha efa ela dia tany amin’ny faribolana bolongana. „Nanamarika“ ir „Patel“ yra žinomi kaip „Huffington Post“, bet žinomi kaip naujausia „transakcija“, tačiau šiuo metu biologera yra „Mahomby Maro Hafa Izay Tsy Mamita“. Na lakile, hoy i Patel, dia ny Tsy mamorona afa-tsy votoatiny fotsiny ihany fa "paramos vengti lenta".
Manamarina i Patel fa mbola betsaka kokoa ny famoahana an-tserasera fa tsy manangana lahatsoratra maro araka izay azonao atao ary miresaka momba ny lanjan’ny tetika henjana hanaovana izany. Ny fandaharam-potoanao nėra dingana voalohany amin’izany.
Chrisas Hornakas, internetinis dienoraštis „Hands Hands“, „Nizara ny eritreriny mikasika ny fiheverana hevitra momba ny lohahevitra vaovao. Hoy i Hornak:
Ary izao, tsy mila ado intonija, andao hahatongavanao izay tena nalehanao teto. Irena hevitra vao manomboka ireo dia manome anao hevitra motina ny lahatsoratra ao amin’ny bilaogy ho an’ny tranokalanao.
Afaka mampiasa ny lisitry ny hevitra 52 manomboka amin’ny fomba roa samy hafa. Azonao atao ny mampiasa ny hevitra tsirairay hanomboka amin’ny lahatsoratra iray isan-kerinandro. Ne, azonao atao naujai simpatijai, kurių gerbėjas manangana lahatsoratra maromaro mamba lo lohevitra mandritra ny herinandro. Hiankina būti dia be ny habetsahan’ny bolongana kasainao isan-kerinandro.
„Idea Starter“ # 1:
Ohatra amin’ny tena fiainana: „Vakio“ yra „groove ny $ 10M“.
„Idea Starter“ # 4:
Eritreto ny fomba ahafahanao mizara tantara iray mifandraika amin’ny raharahanao.
Raha manana toeram-pisakafoanana golfo ianao, azonao atao ve milaza tantara momba ny lalao golfo tsara indrindra?
Tsy ny tsirairay jokio ryškaus vokatra. Indraindray tsy maintsy mivarotra ny marika sy ny ao ambadiky ny marika ianao.
„Idea Starter # 5“:
Eritreto ny zavatra tena mahagaga izay mety hitranga, fa toa tsy ho vita mihitsy, ao amin’ny orinasanao. Ankehitriny, zarao ny eritreritrao sy ny nofinanao amin’ireo mpamaky anao. Ity no karazana fantazos. Bet koks aminontny tontolo ira tena tsara, ny mpilalao golfo repeticija dia mahazo ny lavaka amin’ny iray.
„Idea Starter“ # 6:
Azonao atao ny maka fampitandremana, ahah, na, aš manau, kad nėra statistikos ary mametraka azy ao anaty lahatsoratra bilaogy.
Raha mivarotra sakofo alika vengia lenta ianao, diafaka mizara fampahalalana momba ny fampahatsiahivan’ireo biby fiompy amin’ny taona vitsivitsy lasa izay sy ny antony ananan’ny alika ny mpamaky anao.
„Mihady lalina kokoa“: „Alao i Jasonas toro-hevitra mama“, „Twitter analytics“.
„Idea Starter“ # 11:
Indraindray, ny fomba fitondra-tena tsara efa tranainy dia ny zavatra tsara indrindra azonao soratana. Mety hieritreritra ianao hoe tsotra loatra izany, kanefa misy olona tsy nampiasa ny vokatra na ny servizy na oviana na oviana dia mety mila fanazavana amin’ny antsipiriany.
Ohatra tena misy: WP Kube „Resaka tsara indrindra amininny WordPress“.
„Idea Starter“ # 13:
„Jereo ny valin-kevitrao“, forumai, bet kokia žiniasklaidos priemonė.
Ohatra amin’ny tena fiainana: Jereo kultivatorius nėra mahatonga an’i Jerry halatra bilaogijos vaizdas.
„Idea Starter“ # 16:
Zarao izany ary anontanio azy ireo ny valin-teniny prieplauka momba ny fomba ataonao. Tandremo mba tsy ho tonga feo toa mikotrika mangataka fanamarinana, na izany aza, satria tsy dia tsara ny fandraisan’ny mpamaky izany.
„Idea Starter“ # 17:
Makà zavatra tsotra ary tantarao amin’ny lohahevitrao. Azonao atao, ohatra, ny mikarakara boban-java-nify iray ary miresaka momba ny andro sy ny andro fa ny bobongolo dia manampy anao ho salama amin’ny alàlan’ny fanesorana bakteria avy amin’ny nifinao, manampy anao hitsikitsiky kokoa, sns. Avy eo, tsy maintsy ilazanao izany amin’ny lohahevitrao. Azonao atao koa ny manoratra žaislas ny borosy nif, ny maha-mpikambana anao amin’ny lalao golf eny-toerana dia afaka manompo anao andro aman’alina ary mitandro ny fahasalamanao amin’ny fialam-boly, sns.
„Idea Starter“ # 18:
Misy olona afaka manadinadina olona mahafantatra tsara momba ny lohahevitra mifandraika amin’ny liam-pandrenesana? Azonao atao ny manamarika, priskiriama WHSR, tai yra manoa dinidinika maromaro miaraka amin’ny manam-pahaizana amin’ny zavatra žaislas ny fampiantranoana, WordPress įskiepis mpamorona, mpangalatra, sns.
Naujas fanadasinana ny hafa dia mety hitondra fampahalalana izay mety tsy hoeritreretinao raha tsy izany.
Kasti giliau: Fantaro ny fomba famoronana sary mahafinaritra.
„Idea Starter“ # 20:
„Idea Starter“ # 21:
Misy teny nindramina izay ilainao matetika ho famporisihana na famporisihana? Tai nėra tonalkalo matematikos misija „Ralph Waldo Emerson mitondra ny lohateny hoe Fahombiazana“ (loharanom-baovao sasany dia nanoratra azy fa olon-kafa no nosoratany, fa toa ny diksionany kosa, ka dia miaraka amin mpanoratra). Somalio lavos rinkinys yra tononkalo, bet nesvarbu, ar lazaiko matetika yra bet kokia
"Mba hahafahana mamela izao tontolo izao ho tsara kokoa, na amin’ny alalan’ny zaza salama, zaridaina zaridaina, na fepetra sosialy voavotra; Daugiau nei viena asmeninė azija, ne visi, o ne visi. Izany ne hahomby. "
Azoko atao mora foana ny mamadika izany amin’ny lahatsoratra bilaogy momba ny filozofia amin’ny mpiara-miasa amiko ary manandrana ny fomba tsara indrindra hanampiana azy ireo hiaina mora kokoa. Ny orinasa mihazakazaka dia sarotra ary manatona azy ireo amin’ny maha-mpiara-miasa aminy mba haka ny faneriterena azija dia zavatra tiako atao.
„Idea Starter“ # 22:
Irena lisitra dia mora vakina ho an’ny mpitsidika ny habaka. Inona ne azonao atao? Raha mivarotra kiraro akanjo, azonao atao ny mamorona lisitry ny zavatra 10 nesąžiningi mifandraika amin’ny akanjom-bolo efa tranainy.
Ohatra tena misy: Pardeep Goyal tantaran’i Rs. 0 hatramin’ny 2.000.000 amin’ny volana 6.
„Idea Starter“ # 26:
Sariho ny lohahevitra fototra momba ny tranokalanao, ny vokatrao, na orinasa ary hizara amin’ny mpamaky.
Naujausios nuotraukos į nuotrauką mifangaro amin’ny avo kokoa dia hampiditra mpanjifa vaovao sy mpanjifa mitohy.
Ohatra amin’ny tena fiainana: „Google SEO“ vs „Mano svečias“.
„Idea Starter“ # 38:
Bendra „Twitter“ pokalbių tema?
„Idea Starter“ # 39:
„Idea Starter“ # 40:
„Mamorona“ podcast’ai, kuriuos galite pamatyti kaip lohahevitrao ianao. Vaizdo fotoaparatų rankraščiai, kuriuose yra hizara azy ho lahatsoratra bilaogy. Nei aš, nei čionai, nei aš, nei ponasana, nespėjau. Na dia izany aza, amin’ny fanoratana azy amin’ny endrika an-tsoratra, dia ahafahanao mizara mora amin’ny olona rehetra izany.
„Idea Starter“ # 41:
„Idea Starter“ # 42:
„Idea Starter“ # 43:
Azavao amin’ny mpamaky anao ny antony maha-zava-dehibe an’io lohahevitra io sy izay tianao ho fantatra. Iza no mahalala, metinis hamporisika anao hanoratra boky ny lahatsoratra.
„Idea Starter“ # 44:
„Idea Starter“ # 45:
Makà iray minitra mba hanekena ny mpanoro hevitra anao. Nisy influenceris ve nanome torohevitra anao tany am-boalohany amin’ny nahaterahan’ny bilaoginao? „Zarao ny mpamaky izany vaovao izany ary ampaherezo izy ireo hahita ireo mpampianatra azy manokana.
„Idea Starter“ # 46:
Na, bet ne karazana orinasanao, rehefa nanao izany nandritra ny fotoana kelikely ianao dia hianatra tratrany sy tricks izay manampy anao hahomby kokoa. Inona avy ireo hack nangoninao tamin’ny fomba mety hamonjy ny fotoana ho an’ireo mpamaky?
„Idea Starter“ # 47:
„Idea Starter“ # 48: